Fikarakarana sakafo, fanorenana - izay tsara kokoa ny mifidy, karazany
Trano Home Supplies
Fandevenana ny sakafo - ahoana no fomba safidy azo atao?
Ny singa manan-danja dia sehatra fikarakarana, ny safidy amin'izany dia tokony horaisina araka izay azo atao araka izay azo atao. Ireo fitaovana fantson-tsolika ireo dia aseho amin'ny mpamokatra isan-karazany. Zava-dehibe ny mieritreritra amin'ny antsipiriany amin'ny antsipiriany mba hahazoana antoka ny fividianana.
Ao amin'ny fivarotana dia misy fitaovana fantson-javatra maro samihafa, vita amin'ny fitaovana isan-karazany, izay manana tombony sy tsy fahampiana. Ny fikarohanao izay volivohitry ny tsara indrindra dia ny misafidy ny lakozia, tokony hampiseho fa misy karazana endrika samihafa ary samy hafa amin'ny fomba fananganana. Tokony hodinihina ireo fepetra rehetra ireo mba hahitana ny safidy mety indrindra ho anao.
Fandevenana ny lakozia
Modely toy izany dia midika fa ny sisin'ny sôkôla dia hipetraka eo amin'ny sehatra mitovy amin'ny asa. Izany dia manafoana ny fanesorana ny fitaovana fanontam-pirinty, ary hijery ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra. Amin'ity tranga ity, tena zava-dehibe ny hanaovana lavaka tena marina ho an'ny container, noho izany dia tsara kokoa ny manolotra ny matihanina, raha tsy izany dia afaka mandeha ". Tokony hikatona amin'ny seza silikon manokana ny firazanana. Ny fantsom-pako ao anaty lakozia dia mety amin'ny endrika samihafa, ary vita amin'ny fitaovana maro.
Amboarina ho an'ny trano fandroana
Ity dikan-kapitaly ao amin'ny tobim-pahadiovana ity dia midika ny fametrahana azy amin'ny fametrahana azy ao amin'ny trano fidiovana. Raha toa ka mampitaha ity safidy ity amin'ny iray aloha ianao, dia mora kokoa ny fametrahana ny sambo. Ny halalin'ny dobo fanasan-tsakafona dia mety tsy hitovy, ary mety hahitana kibay mihoatra ny iray. Ny fanorenana dia mora ny manatanteraka amin'ny tananao, ny tena zava-dehibe dia ny fiantohana ny fihenam-bava sy ny fahamendrehan'ny tohotra. Misy ny tsy fahampian-tsakafo - tsy fahampian'ny fahadiovana, satria ny rano dia mety eo amin'ny elanelan'ny lavaka fantsona sy ny fantsona.
Mora mitsimoka ny lakozia
Ao amin'ny efitrano kely, ny safidy idealy dia safidy an-kibon'ny tany, satria manampy azy ireo hamonjy ny toerana, hiantohana ny toerana malalaka. Mety ho samy hafa ny fandaharam-pikarakarana ao amin'ny lakozia, ohatra, misy karazana pentagonal sy triangular. Ny karazana fandriana amin'ny fametrahana efitrano iray dia goavana, anisan'izany ireo modely miaraka amin'ny goro maro. Tokony ho raisina an-tsaina fa ny fanadiovana ny zoro dia tsy hitranga ao an-joron-trano, izay azo ampiasaina hametrahana fanafody na zavatra kely hafa.
Fonosana boribory vita amin'ny lakozia
Ho an'ny fametrahana mari-pamantarana sy angovo, ny lavaka boribory dia mety tsara, izay heverina ho ilay ergonomika sy tsara indrindra. Misy lavaka fandroana kely, ary koa modely lehibe sy lalina izay tena tsara ho an'ny fianakaviana maro. Iray amin'ireo tombontsoa lehibe ireo dia noho ny tsy fisian'ny zoro ao anaty tahiry toy izany dia sarotra kokoa ny mikarakara. Raha azo atao, azonao atao ny mametraka modely amin'ny goro roa.
Iray amin'ireo modely mahazatra indrindra azo jerena ao amin'ny lakozia maro. Ny fitadiavam-bilia nilaina tamin'ny lakozia dia manana habe toy izany: 50х50 sm na 60х60 jereo Tena ampy ho an'ny sakafo fisasana tsara. Kely be ny kiran-tsoavaly ary aseho amin'ny endrika marobe. Natao avy amin'ny fitaovana isan-karazany izy ireo, mba hahafahanao misafidy ny safidy mety ho anao.
Ny endrika, izay malaza ihany koa, dia afaka manana habe isan-karazany, noho izany ireo populaire malaza dia 50x125, 50x100 ary 50x80 cm. Ny famaritana amin'ny karazana vatomamy izay misafidy ny lakozia, dia tsara ny manamarika fa ny vokatra azo avy amin'ny tsokajy dia mora sy mahomby. Ity no safidy tsara raha tery ny ambony ambony. Ny vilia fantsom-bokatra iray dia mety manana biriky roa, izay mora ampiasaina.
Ampingam-pitiavana ho an'ny lakozia
Raha avelan'ny faritra, azonao atao ny mametraka kitapo lehibe iray, izay misy efitrano ampy ho an'ny sodina, izay mety ahitana fitondrana roa na efatra. Na inona na inona ny endriky ny lakozia, ny mofomamy miaraka amin'ny vilia vitsivitsy dia hiditra ao aminy tanteraka, satria misy vary varotra maro samihafa amin'ny endrika, habe ary fitaovana. Ny safidy malaza indrindra dia ny vilia baoritra roa, izay lehibe kokoa noho ny an'ny hafa. Ny vilia baolina faharoa dia azo ampiasaina, ohatra, mba hisakafo na hisakafo, hanasa legioma na voankazo sy ny sisa.
Fikarakarana trano fandroana
Raha kely ny faritra dia mila mampiasa ny metatra toradroa marina ianao. Mba hisorohana ny toerana dia ilaina ny vilia fantsom-boaloboka kely, izay amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia manana endrika ara-dalàna. Na dia kely fotsiny aza dia tsy manaisotra ity fitaovana fantson-tsambo ity. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny hatevin'ny kalsa toy izany dia eo amin'ny 35 santimetatra eo ho eo, saingy mety ho hafa ny halavany. Ny vilia kely dia mety amin'ny kitapo tsotra, voaravaka amin'ny endrika minimalista .
Iza no sidina hisafidy ny lakozia?
Mba hividianana ny akorany tsara tarehy ao anatiny ary tsara ny andraikiny, ilaina ny misafidy fepetra maromaro amin'ny fisafidianana.
Lafiny. Eto ianao dia hanomboka amin'ny habeny amin'ny lakozia sy ny isan'ny olona ao amin'ny fianakaviana. Raha lehibe ny faritra, dia afaka misafidy kilaometatra maromaro miaraka amin'ny kirihitra maromaro ianao. Rehefa misafidy, dia tokony horaisina koa ny halalin'ny lavaka fanasan-tsakafo, satria ny halalin'ny fahafaha-manao, dia mety kokoa ny miasa miaraka amin'izany. Ny lehibe indrindra dia 15-20 cm.
Tandremo ny fisehoan-javatra sy ny endriky ny kofehy, izay mety amin'ny habeny samihafa. Any amin'ny sisin'ny rindrina dia mety hisy ny fanokafana ny mixer, dispensaire ho an'ny mpanadio, fanivanana sy ny sisa.
Ny fikarohana ny fomba fisafidianana toaka ho an'ny lakozia, ilaina ny miresaka momba ny ilàna ny hamaritra raha ilaina ny elatra na tsia. Eto izahay dia midika hoe fiaramanidina am-paradisa izay misokatra amin'ny faritra miasa. Ny elatra dia tsy misy afa-tsy eo amin'ny iray na roa. Zava-dehibe ny mampiavaka azy. Ny vahaolana malaza dia elatra misy savaivozana, izay misy mpitari-dalana ho an'ny fandotoana rano. Tsy maintsy ho voatery hikorontana izy io mba tsy hihozongozonan'ny rano.
Mba hahazoana antoka fa ny vokatra dia ny kalitao avo dia tokony hividy saka amin'ny marika fanta-daza. Ho an'ny vola madinika dia afaka mividy modely avy amin'i HAMA sy Alveus. Tsara ny kalitao, fa lafo ny vokatra avy amin'ny marika Blanco. Raha tsy afaka mamonjy ianao ary vonona ny handoa vola betsaka amin'ny fanasana, dia fidio ny vokatra tahaka ireto: Shock, Elleci, Florentina ary ny hafa.
Ny fikarakarana samihafa dia mendrika ny famonoana vilany maoderina, izay karazana toeram-piasana, satria misy fitaovana fanampiny fanampiny izany. Tsara kokoa raha ampidirina ao anaty kitapo izy ireo, ka ny tsipiriany rehetra dia mifanaraka amin'ny endrika sy ny rafitra ara-teknika. Ny fanampiana malaza indrindra:
Valve automatique. Izy io dia ampiasaina mba hifehezana ny draine ao anaty ranom-boasary, izany hoe, miaraka amin'ny fitaovana entina hanokatra na hikatona. Apetraho eo amin'ny sisiny iray amin'ny sodina (amin'ny ankamaroan'ny tranga eo anoloana) ary ampifandraiso amin'ny sodina. Tsara izany rehefa misotro toaka, mba tsy hampidina tanana amin'ny rano.
Mpizara. Ity no fitaovana fanorenana ho an'ny fanadiovana. Ny haavon'ny rano fisotro madio dia eo ambanin'ny basirika ary tsy hita izany. Ny doka mpanodina dia amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra eo akaikin'ilay mpandrendrika.
The collander. Ity no anaran'ny boaty vita amin'ny vy na plastika amin'ny endrika mivangongo miaraka amin'ny lavaka any ambany. Mivembena amin'ny ranom-boankazo izy io ary ampiasaina hanasana voankazo sy legioma, ary koa ho an'ny fanimbana sakafo.
Board. Baraingo finday mahazatra, ny sisiny dia manomboka amin'ny sisin'ny lavaka. Azo atao amin'ny hazo, plastika na fitaratra izy io. Tsara ny manapaka sakafo ary atsipy ao anaty vilany na ranom-boankazo.
Famindrana fitaovana. Noho izany dia misy fitaovana kely, izay fihinana sakafo. Maro no niatrika ny toe-draharaha rehefa namono ny fantsom-bokatra ny sakafo kely, ka miteraka fofona sy tsy mahafinaritra. Mba hiatrehana io olana io, dia mihodina ilay saka.
Toeram-pisakafoanana tsy misy rambo
Ny vokatra azo avy amin'ny vy dia anisan'ireo safidy malaza, satria ny vidiny dia azo vidiana, ary manana fahaiza-manao tsara izy ireo.
Ny fantsom-pitotoam-barotra ho an'ny trano fandroana dia mandefitra ny fitsangatsanganana ara-pahasalamana, tsy matahotra ny fiantraikany eo amin'ny mekanika sy ny vatana. Raha tsy mety ny mijery ireny vokatra ireny, dia hiharatsy ny endrik'izy ireo.
Ny fitoeran-tsakafo tsy misy fefy dia misy amin'ny sehatra maro, noho izany dia afaka manana endrika sy tanjona samihafa ny modely, noho izany dia afaka misafidy safidy ho an'ny rafitra fanokafana ny lakozia ianao.
Mandritra ny famolavolana kalsa, ampiasaina ny nikela sy ny chrome, izay manampy amin'ny vokatra mahafinaritra mahafinaritra ny vokatra, ary mampihena ny mety ho voka-dratsy. Raha tianao, azonao atao ny maka kitapo misy vilia.
Ny fatiantoka dia ahitana ny tabataba miaraka amin'ny tohodrano angonina, fa ny mpamokatra sasany dia mamokatra modely amin'ny rindrina matevina, izay tsy ahitàna io minitra io.
Manasa granita keramika ho an'ny lakozia
Izany dia zava-baovao ao amin'ny tsenan'ny plumbing, saingy maro no afaka nankasitraka ny tombontsoa azon'ity safidy ity, na dia misy ihany aza ny tsy fahampiana.
Ny fantsom-boanjo keramika dia mety amin'ny endriky ny trano fidiovana samihafa. Izy io dia aseho amin'ny loko marobe, ohatra, amin'ny mainty, mavo ary mainty.
Tsara ho marihina fa sarotra ny fitaovana, ka sarotra ny mamela ny ratra sy ny fahasimbana hafa amin'izany. Aza matahotra ny fasika granita.
Mora ny mikarakara ireo vokatra vita amin'ity fitaovana ity, noho izany dia azo ampiasaina ny fomba hafa sy ny fitaovana mahery vaika.
Tsara ny manamarika fa sarobidy be ny vidin'ny mpividy toy ireny. Ankoatra izany, ny tsy fahampiana dia noho ny fipoahana mahery vaika amin'ny sodina dia mety hipoitra.
Mora mitsimoka avy amin'ny vato kanto
Satria tsy ny vato voajanahary rehetra no mety ho an'io karazana garabola io, satria mavesatra be izy ireo, dia nosoloana fitaovana vita amin'ny fitaovana - vovoka misy vatosoa voajanahary sy hodi-kazo. Azo atao amin'ny granita, quartz na marbra ny crumb.
Sarotra be ny siny vato ho an'ny lakozia, ary maivana kokoa ny dikan-teny vita amin'ny fitaovana artifisialy, nefa manintona.
Azo simbaina ny fahasimbana madinika, ary mety hampiova endrika ny olona lehibe.
Ny vokatra vita amin'ny vato kanto dia mameno ny tabataba ary manohitra ny fiantraikan'ny toetrandro ambony.
Fikarakarana tranokala marbra
Mahavariana ny vatomamy marbra, saingy mila fanazarana tsara kokoa ity fitaovana ity mba hisakanana ny fahatsarany ny vokatra. Izy ireo dia tena tsara ho an'ny fomba malaza.
Ny halavana avy amin'ny vato ho an'ny lakozia dia mety amin'ny loko samihafa, ohatra, fotsy, fotsy, mainty ary ny sisa.
Ny vatany voajanahary dia malefaka, ka raha mipoitra eo amin'ny tany ny fitsingerenana, dia mety tsy ho simba izy ireo.
Ny fatin-tsakafo amin'ny marbra dia tsy matahotra ny mari-pana avo, fa ny fitaovana dia mitambatra ary afaka mamorona toerana, izay tokony hesorina avy hatrany.
Koa satria be dia be ny vokatra, dia zava-dehibe ny mametraka azy ireo araka ny tokony ho izy, manome fanampiana fanampiny.
Famantaram-panaovana fanamafisam-peo miaraka amin'ny fanaraha-maso remote
Mialà ao anaty fandroana
Kitapo fanadiovana trondro
Toeram-pisakafoanana misy efitra fandroana
Flash dia tsy handao na iza na iza tsy hiraharaha
Kitapo marefo amin'ny automatique ho an'ny tsara
Dihy tantely - sakafo
Borreliosis mikotrika boribory - soritr'aretina sy fitsaboana
Mansard na dingana faharoa?
Afaka mandany lanja ve aho amin'ny fitsangantsanganana tady?
Inona no vitamina D?
Sakafo ho an'ny salady eo amin'ny latabatra fety
Spit spike - ny dikan-teny rehetra amin'ny loko modely
Inona no atao hoe varavarankely ao anaty trano?
Oviana ny mikrosopope